Iindaba - Imakethi yentengiso yeMethionine ekumgangatho ophantsi
Kwixesha elizayo elikufutshane, imakethi yemethionine ibisebenza ngaphakathi kuluhlu olusezantsi lwembali, kwaye kutshanje iye yehla. Ixabiso langoku li-RMB 16.5-18 / kg. Umthamo omtsha wemveliso yasekhaya ukhutshwa ngokuthe ngcembe kulo nyaka. Unikezelo lweemarike luninzi kwaye uluhlu oluphantsi luyahamba. Iingcaphulo zentengiso zaseYurophu ziye zehla kwi-1.75-1.82 euros / kg. Ukuchaphazeleka ngamaxabiso entengiselwano abuthathaka kunye nokukhula kwimveliso yasekhaya, ukungeniswa kwemethionine kuye kwehla kwiinyanga ezidlulileyo.
Ukusukela ngeyoMqungu ukuya kuJulayi 2020, ukungeniswa kwelizwe lam methionine kwehla nge-2% ngonyaka-ngonyaka
Ngokwezibalo zamasiko, ngoJulayi 2020, ilizwe lam lingenise ngaphakathi iitoni ezili-11,600 zeemethionine eziqinileyo, ukwehla kwenyanga ngenyanga kweetoni ezingama-4,749, ukwehla ngonyaka kwiitoni ezingama-9614.17, ukwehla nge-45.35%. NgoJulayi 2020, ilizwe lam lingenise iitoni eziyi-1,810 kwimizi-mveliso yaseMalaysia, ukonyuka kweetoni ezingama-815 ngenyanga -kunye nokwehla ngonyaka ngeetoni ezingama-4,813. NgoJulayi, ukungeniswa kwelizwe lam lisuka eSingapore lehle kakhulu laya kwiitoni ezingama-3340, ukwehla kwenyanga nenyanga kweetoni ezingama-4840 kunye nethontsi kunyaka nonyaka leetoni ezingama-7,380.
Ukusukela ngeyoMqungu ukuya kuJulayi 2020, ukungeniswa kwemethionine yelizwe lam kufikelele kwiitoni ezingama-112,400, zehla nge-2.02% ngonyaka. Amazwe amathathu aphezulu eSingapore, eBelgium naseMalaysia. Phakathi kwabo, ukungenisa ngaphakathi okuvela eSingapore kwaba lelona nani liphezulu, ngokungeniswa okungaphezulu kweetoni ezingama-41,400, kubalwa ama-36.8%. Kulandelwa yiBelgium, umthamo wokungenisa okwenyuka ukusuka ngoJanuwari ukuya kuJulayi wawuziitoni ezingama-33,900, ukonyuka konyaka ngama-99%. Umthamo wokungenisa elizweni okhulayo ovela eMalaysia yayiziitoni ezingama-24,100, ezantsi ngama-23.4% ngonyaka-ngonyaka.
Icandelo leenkukhu liyaqhubeka nokuphulukana nemali
Xa ulwandiso lweshishini leenkukhu ludibana nesifo esitsha sesithsaba, ukusebenza ngokukuko kweenkukhu kuyadodobala. Kulo nyaka, amafama ahlelwe yilahleko ixesha elininzi. Ixabiso eliphakathi leenkukhu zenyama yokuthengisa zii-3.08 yuan / kg, ezantsi ngama-45.4% ngonyaka-nangama-30% ngonyaka-ngonyaka. Ubhubhane weehagu zaseAfrika unendawo encinci yokusetyenziswa kunye nokukhula kwemfuno yentengiso. Ayisiyo kuphela inyama yenkukhu kunye namaqanda aphulukana nemali, kodwa amadada enyama nawo awanathemba. Kutshanje, uFeng Nan, uNobhala-Jikelele weSebe leShishini leenkukhu leShandong yokufuya izilwanyana, uthe inani lamadada kwishishini lelizwe lam liphakathi kwezigidi ezili-13 ukuya kwizigidi ezili-14, esele igqithe ibhalansi yonikezelo kunye nemfuno . Ukusebenza ngokugqithisileyo kubangele ukuba inzuzo yeshishini iye kwi-plummet, kwaye ishishini ledada likwimeko yelahleko kuwo wonke umzi mveliso. Ukwehla kokufuya iinkukhu akululungelanga ukufunwa, kwaye imakethi yemethionine iyehla.
Ukushwankathela, nangona umthamo wokungenisa we-methionine wehlile kwiinyanga ezidlulileyo, kutshanje kuye kwaxelwa ukuba isityalo semethionine sase-US siyimisile imveliso ngenxa yenkanyamba laseMelika. Nangona kunjalo, imveliso yabavelisi basekhaya inyukile, iikowuteshini zabavelisi zibuthathaka, ukusebenza ngokukuko kweenkukhu kulukhuni, kwaye ukubonelelwa ngemethionine kuninzi kwaye kubuthathaka bexesha elifutshane Kunzima ukutshintsha.
Ukutya kwezilwanyana, L-Threonine kwiBakala lokutya, I-L-Valine 72-18-4, 73-32-5 L-Isoleucine, L-Threonine Pharm kwiBakala, Ikhemesti yeBakala L-Leucine,